Shirkadda Xalwo Kismaayo oo door wayn ka cayaaraysa caleema saarka beeldaaje Maxamed (sawiro) – Radio Daljir
Abriil 14, 2018 5:38 g 1
Waxaa degmada Carmo ee gobolka Bari kasocota qabanqaabada caleema saarka beeldaajaha beelaha Cali Saleebaan Beeldaaje Maxamed Beeldaaje Ismaaciil Beeldaaje Xaaji Cabdulaahi oo ay ka qaybgalayaan wafuud kalle duwan oo ka kala timid gobolada dalka iyo dibaddiisa.
Madaxwaynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, wasiiro, xildhibaano iyo duubab kalle duwan oo dhaqan ayaa soo gaaray degmada Carmo ee gobolka Bari.
Maamulaha guud ee shirkadda Xalwo Kismaayo Cabdilaahi Sheekh Axmed Nuur oo waraysi siiyay radio Daljir ayaa sheegay inay door wayn ka cayaarayaan caleema saarka beeldaajaha.
Shirkadda ayaa waxaa uu sheegay inay waddo waxyaabo cajiib ah oo siwayn usoo jiidan doonta beeldaajaha, iyadoo macmanaanka sida xalwadda , doolshaha, sharaabka, toorno iyo waxyaabo dalka ku cusub ay keeni doonaan.
Ogeysiis 58 Wararka 19902
Guddiga Caleema Saarka Beeldaaje Maxamed oo ka hadlay wafuudda soo gaaray (dhegayso)